Andrim-pitondran’ny fahefana avo – MyDago.com aime Madagascar
Andrim-pitondran’ny fahefana avo
Manao ala-safay daholo
Manomboka any amin’ny fiadidiana ny tetezamita avo, ny fiadidiana ny primatiora, ny paremantera roa tonta (ireo ihany no voatondron’ny taratasy fa andrim-pitondrana mandrafitra ny tetezamita nanomboka tamin’ny 9 marsta 2011) dia samy manao alasafay daholo amin’ny asa nampiandraiketin’ilay taraasy azy avy. Sady tsy mahavaha ny olana no mihenahena tsy manatanteraka izay vaha-olana atolotra azy. Mikatso tanteraka ny fitantanan-draharaham-panjakana…Mifanilaka, mifampiahiahy. Tsy olana avy ety ivelany no mahatonga izany fa any anaty lapa any.
Inona moa no mbola andraikitr’ilay komity miaramila ivondronan’ny be galona iny ? Inona ihany koa no anjara asan’ilay fitsarana avo momba ny lalampanorenana ? Dia hanao inona sy mbola hanao inona ny Komity mahaleotena momba ny fifidianana ? na koa ilay fitsarana manokana hiandraikitra ny fifidianana ?
Mandalo fotsiny, zara raha misy ady hevitra ny volavolan-dalàna tokony mba ho dinihin’ny parlemantera roa tonta. Iniana atao ny fanitsiana isan’andininy ny volavolan-dalàna samihafa, kanefa tsy fantatra ny tanjona tokony hiantefàn’izany fanitsiana izany. Manao an-kiafina sy tsy miseho eo anoloany indray ny mpanatanteraka indraindray. Lany rora manakiana ny Ceni ny teny Tsimbazaza tamin’ny resaka vola sy ny fitantanana izany. Minia mangiana ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta amin’izay fanapahan-kevitra politka tokony hibaikony ny mpikambana ao amin’ny governemanta, hany ka mifandrombaka samy miteny amin’ny fomba tiany avy na ny lehiben’ny etamazaoron’ny Tafika, na ilay filohan’ny komity miaramila, na ny minisitry ny foloalindahy. MIfanilaka, toy izany koa, amin’izay tokony hanome ny datim-pifidianana, ilay CENI izay manao izay hahatomombana fotsiny ny adidiny ho amin’ny fampandehanana ny fifidianana sy ny filohan’ny tetezamita avo, izay hafa ny tondroin’ny tanany, ary hafa no izoran’ny famindrany.
Tsy manaiky ny tsy fahombiazana
Ny ravin-taratasy vita rango-pohy sisa no tena anto-pijoroan’izao fahefana mitondra an’i Madagasikara izao, ary na ny lalàna manan-kery ho fanamarinana izany aza dia tsy misy na iray aza. Minia mangina sy tsy handrenesam-peo ny HCC, ka manao fanambarana ny filoha afrikana tatsimo fa ny sori-dalana nasiam-panovàna no tokony hampiharina eto. Tsy hay intsony na mahaleotena ny tanintsika , na tsia. An-ditra sy alasafay fotsiny ny filazana fa hovitaintsika ny fifidianana sy ny fitsaharan’izao krizy izao, kanefa miharihary loatra ny tsy fahombiazana. Fahefana avy aiza no nahafahana nanangana fitondrana avy amin’ny alalan’ny sonia rangopohy ? Mampieritreritra !
Ny vahoaka no tompon’ny fahefana
Auteur Ony RambeloPublié le 20 juin 2011 Catégories Malagasy, Politique
3 pensées sur “Andrim-pitondran’ny fahefana avo”
Mazava be ! » La fin justifie le moyen «
21 juin 2011 à 8 h 09 min
Ny HCC angamba mbola mi-cuver Jy sy By daholo, sady voky cosondelé !!
Tsy andrimpanjakana intsony izany HCC izay fa andrin-dRajoelina sy ny forongony.
Précédent Article précédent : Fetim-pirenen’ny Gasy isaky ny 26 jona
Suivant Article suivant : Tsy hamela ny Filoha Ravalomanana hody irery an-Tanindrazana ny vondrona SADC !